PVC ngwugwu na -enye nsogbu maka ụmụaka ụmụaka jelii akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ emeputa na onye na -eweta ngwaahịa | INPVC
Ekweghị ekwe: ShoreA55-75
Agba: Ngosipụta, Ọkara Na-atụgharịgharị
Ngwa: Ọgwụ akpụkpọ ụkwụ Kiddy
INPVC na -enye ọtụtụ 100% ogige PVC na -amaghị nwoke ejiri maka mmepụta Kiddy Children Jelly Shoes. Ngwakọta akpụkpọ ụkwụ anyị nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ.
Akpụkpọ ụkwụ jelii, nke a na-akpọkarị jellies, bụ nke ejiri PVC mee ya, ọ na-achacha achacha nke na-acha odo odo. Ejiri PVC mee ya kpamkpam, akpụkpọ ụkwụ jelii a nwere isi na -esi ísì ụtọ.
Iji mepụta ngwaahịa a na ngwa anyị kwadebere nke ọma, ndị ọkachamara anyị nwere nkà na-eji polyvinyl chloride ọkwa dị elu na usoro ọhụrụ. A na -achọ ngwaahịa a na -enye ka ejiri ya na ụlọ ọrụ akpụkpọ ụkwụ iji rụpụta ma chepụta akpụkpọ ụkwụ ụmụaka, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na ogbe achịcha.
INPVC - ugbu a, ọ bụ otu n'ime ndị na -emepụta ngwa ahịa ngwakọta ngwa ahịa PVC. A na-arụpụta ogige PVC anyị enyere na ụlọ anyị ma dị na nke ọma, nke na-ahụ maka nkasi obi nke naanị ya.
Ọmarịcha agba agba anyị na -eme ka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka, slippers, akpụkpọ ụkwụ jelii mara mma yana ogige anyị na -enyere akpụkpọ ụkwụ gị aka ịdị fechaa & sie ike. A na -arụpụta ma na -ahazi ngwaahịa anyị site na itinye teknụzụ dị elu na igwe dị ka ụkpụrụ ụkpụrụ ụwa si dị.
Site na ngwaahịa dị iche iche iji gboo mkpa ahụ na mmetụta ya na gburugburu ebe obibi yana ahụike mmadụ, anyị na-arụpụta plasticized ihe na-enweghị Phthalates na Lead-free. nkọwa ndị ọzọ onye ahịa ga -achọ.
Njupụta 1.22-1.35 g/cm3
Ngwa Akpụkpọ ụkwụ ụmụaka jelii, akpụkpọ ụkwụ jelii ụmụ nwoke, akpụkpọ ụkwụ PVC dị nro
Akpụkpọ ụkwụ Baby Beach, Akpụkpọ ụkwụ kristal oge okpomọkụ, Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nkịtị
A na -eji ogige akpụkpọ ụkwụ PVC n'ọtụtụ ebe maka ntụtụ Kiddly Children Jelly Shoes. Ngwongwo PVC dị nro ma na-agbanwe agbanwe nwere nguzozi dị elu, enweghị isi, etinyere nguzogide dị mma maka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka.
Enwere ike ịhazi pellets PVC dị elu na kristal ka ọ bụrụ ọcha, aja aja, odo na ihe ndị ọzọ.
Site na ahụmịhe zuru oke nke nrụpụta PVC, anyị na -enye usoro ahaziri ahaziri & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ.
Nke gara aga: Ogige PVC na -agbanwe agbanwe maka ntụtụ akpụkpọ ụkwụ Pet
Osote: Mgbanwe Polyvinyl chloride Ihe N'ihi ịkwanyere akpụkpọ ụkwụ Ọgwụ